संक्रमित नर्सको जागिर खाइदिने धम्की दिए डाक्टरले – Health Post Nepal
संक्रमित नर्सको जागिर खाइदिने धम्की दिए डाक्टरले
२०७७ साउन २२ गते १२:०३
आइसोलेसनमा सुधारको माग गरेपछि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जागिरबाट निकालिने ध म्की दिइएको छ।
अस्पतालको आइसियु वार्डमा खटिएकी महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड अस्पतालका संयोजक डा. जामुन सिंहले लाइसेन्स खारेज गरेर जागिर खाइदिने धम्की दिएका हुन्।
दुई दिनअघि प्रादेशिक अस्पतालका दुईजना चिकित्सकसहित १७ जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा अस्पतालकै जेनरल आइसियुमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूसमेत थिए। संक्रमित सबै जनालाई प्रादेशिक अस्पतालकै कोभिड अस्पतालको आइसोलेसनमा बस्न भनिएको थियो।
मंगलबार साँझ आइसोलेसनमा लगिएका उनीहरू व्यवस्थित र सुरक्षित नरहेको भन्दै त्यहाँ बस्न मानेनन्। ‘आइसोलेसनभित्र लक्षणसहितको संक्रमित रहेको तर आफूहरूमा कुनै लक्षण नदेखिएकाले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान उनीहरूले राखेका थिए।
स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो अडान राखेपछि कोभिड अस्पतालका संयोजक डा. सिंहले आफूहरूको लाइसेन्स रद्द गरेर जागिर खाइदिने धम्की दिएको उनीहरूले बताएका छन्।
‘आइसोलेसनभित्र केही व्यवस्था गरिएको छैन, सुत्ने बस्ने ठाउँसमेत छैन, खाना पनि नामको मात्र हुन्छ,’ उनीहरूले गुनासो गरे, ‘हामीलाई लक्षण नदेखिएकाले छुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्न भन्यौं तर डा। सिंहले जागिर खाइदिने धम्की दिनुभयो।’
‘हामीले त आइसोलेसनलाई व्यवस्थित बनाउन भनेका थियौं तर जागिर खाइदिने धम्की पो खानुपर्यो,’ संक्रमित एक स्वास्थ्यकर्मीले भनिन्।
आइसोलेसन व्यवस्थित नभएसम्म भित्र नजाने भन्दै उनीहरू सबैजना मंगलबार बाहिरै बसेर रात बिताएका थिए। रातभर बाहिरै बस्दा पनि आफूहरूबारे कसैले ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।
केही दिनअघि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका एकजनालाई प्रादेशिक अस्पतालको आइसियुमा भर्ना गरेको थियो। त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले ती व्यक्तिमा कोरोनाको लक्षण देखिएकाले जनरल आइसियुमा भर्ना नगर्न सुझाएका थिए। तर, डा। सिंहले जबरजस्ती आइसियुमा भर्ना गर्न लगाएर आफूहरूलाई पनि संक्रमित बनाएको उनीहरूको आरोप छ।
‘पिसिआर रिपोर्ट आउनुअगावै लक्षणको हिसाबले कोरोना संक्रमित हुनसक्ने हामीले भनेका थियौं,’ आइसियुमा भर्ना भएको एक दिनपछि ती बिरामीको मृत्यु भयो । र, संक्रमण पनि पुष्टि भयो,’ ती स्वास्थ्यकर्मीले भनिन्, ‘मृतकलाई कोरोना पुष्टि भइसकेपछि हामीलाई रामजानकी होटलको क्वारेन्टाइनमा राखियो । तर, मंगलबार एक्कासि आइसोलेसनमा जानुपर्ने भनियो ।’
आइसियुमा भर्ना भएका ती व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भइसके पनि डा. सिंहले आफूहरूलाई जबरजस्ती ड्युटी गर्न लगाएको उनीहरूले भनाइ छ।
कोभिड अस्पतालका संयोजक डा। सिंहले भने आफूले ती स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्की दिएको सकारेका छन् । तर, उनीहरूलाई तर्साउन मात्र आफूले धम्की दिएको सिंहको भनाइ छ ।
‘उहाँहरू आइसोलेसनभित्र जान तयार भइरहनुभएको थिएन, बाहिर पानी परिरहेको थियो, साँपकिराले टोकेको भए के हुन्थ्यो, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्थ्योरु,’ सिंहले भने, ‘त्रास देखाएपछि आइसोलेसनभित्र जान्छ कि भनेरमात्रै जागिरबाट हटाइदिने धम्की दिएको हुँ । अरू केही भनेको छैन ।’
संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरू आइसोलेसनमा बस्न नमानेपछि बुधबार बिहान नजिकै रहेको नर्सिङ क्याम्पसको होस्टलमा बस्ने व्यवस्था गरिएको प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा। नागेन्द्र यादवले जानकारी छन् ।
‘नर्सिङ क्याम्पससँग कुरा गरेर उहाँहरूलाई होस्टलमा राख्ने व्यवस्था भएको छ, उहाँहरू पनि त्यहाँ बस्न तयार हुनुहुन्छ,’ डा. यादवले भने।